THT - Tena Ho Tsaroanao | Ankapobeny | 3
Valin-kafatra ho an'i Rossy
Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 22:27
«Toujours victime mais jamais responsable!» hoy i Alidera AR izay.
Io no tena olana tsy mampandroso antsika Malagasy.
Natao ny hangina fa misy karazan-javatra tena mahavaka mihitsy.
Tsy maninona asehoy daholo ny mari-pahaizana rehetra. Fa toa tena fahaizana tsy amim-pahalalana izy ity sady lany henatra koa angamba.
Milaza ianareo fa demokraty manaja ny safidim-bahoaka kanefa nandray basy nanao fanamiana kolonely, raha ny sary nandeha eraky ny tanàna no inoana, nanongam-pitondrana ary namingavinga ny safim-bahoaka tamin'ny 2009. Manginy fotsiny ny filazana fa manana mari-pahaizana ambony amin'ny resaka lalàna...
Fa ny tena mahagaga sy mahazendana dia ny toa tsy fahalalana akory ny andraikitra nangatahana na norombahana ho raisina.
Efa ianareo no nitondra ny tany sy ny vahoaka nandritra ny enin-taona. Fa mbola ny olona efa nalefa sesi-tany no omena tsiny. Sa mbola ny olona efa sesi-tany ihany sady tsy navela hody no asaina mandroaka ny fakonareo? Ny toerana nalainareo fa ny adidy sy andraikitra miaraka aminy navelanareo. Fa vola miditra ho an'i Madagasikara angaha ny hofan-trano sy ny hetra naloanareo any Frantsa na Arabia Saodita na Maorisy...? Manome asa ho an'ny vahoaka Malagasy angaha izany? Indrindra ilay vahoaka lazainareo fa amabany tanàna?
Fa ny "OrinasaTiko" na andeha lazaina aza hoe tsy nandoa hetra, ohatrinona ny vola nampiasainy teto ary nampiasa Malagasy? Ohatrinona ny volany nipetraka teto amin'ny banky teto Madagasikara?
Dia tena mahagaga tokoa ity solom-bavam-bahoaka Malagasy lany teto Iarivo ity manaiky ny hoe «aleo ny any @ province @ zay no ataontsika tsara noho ny antananarivo fa reto tanà reto olona hypocrite daholo... aleo hiosona anaty lavaka, fako sy ranotay ao ...». Mba tadidy ve farafaharatsiny hoe ny olona nifidy anareo anie no hihosona anaty lavaka sy fako ary ranotay??? Mbola ireo ihany koa ilay vao avy nitsabo 9.
Mba olona mieritreritra an'i Madagasikara ve no mahasahy miteny fa aleo ny Renivohitra ho simba? Solom-bavam-bahoakan'i Madagasikara tokoa ve?
Aoka lehiretsy fa mba efa olona nafahana ianareo a! Naka toerana eto amin'ny tany sy ny Fitondrana ianareo na tamin'ny hery io na nangatahana. Dia raiso ilay adidy sy andraikitra miaraka aminy fa aza ny hafa foana no omena tsiny lava.
Dia misaotra mampahatsiaro fa tena ao anaty adidy sy andraikitry ny solom-bavam-bahoakan'i Madagasikara izahay na tsy nifidy azy aza. Aza variana amin'ny arina ery handrin'ny hafa fa jereo ihany koa ilay andry ao anaty maso e.
Dia na inona na inona no teotran'ny mponin'Iarivo, na hypocrite izy na izay anarana rehetra efa nomena azy, tsy ifanerena ny mipetraka eto e! Aza mampijaly tena eto, ary indrindra aza mampijaly ny mponina eto. Hajao ilay tany sy ny mponina ary ny tantarany. Raha lafatra ny tany an-kafa nifindra tany ianareo.
Malalaka ity Madagasikara mamitsika ity sady tsara raha asondrotra amin'izay izy ity e! Mila sy efa mitaky ny isehoan'ny tena lanjan'ireo baoritra be dia be efa dradradradraina lava ireo manko izy ity
Basy atifi-kavana tsy misy «hypocrisie» ny ahy! Raha hanao dia andao atao tsara ary aleo mifanaja.
Omeo ohatra tsara ny vahoaka e!
Trafon-kena ome-mahery. Am-bava homana, am-po mieritra.
Atsipy ny tady ho eny an-tandroky ny omby. Atsipy ny teny ho any am-pon'ny mahalala.
Aiza ry avara-pi!!!???
Andriamahery AR tao amin'ny Facebook
Filazana avy amin'ny mpitsindroka fako
Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 11:14
- Noho ny fahatsapana tato ho ato fa mihamitombo be ny isanay mpitsindroka eny amin'ny toeram-panariam-pako,
- Noho ny fahitana fa midina dia midina ny kalitaon'ny fako azonay tsindrohana,
- Noho ny fisian'ireo aretin-tsy fantatra namely ny kibon'ireo namanay saingy soa ihany fa sitrantsitrana fahatany teny tsy misy fanafody,
- Ary noho ny fahafantarana fa olona azo ifampiresahana ianareo dia:
Andininy 1: Miangavy izahay mba tsy ho afangaro loto na fako hafa ny taolana avy eny an-databatra fihinananareo fa atokana @ harona "sachet" madio,
Andininy 2: Mba saraho hiavaka amin'ny varin'apango vaovao ny varin'apango tranainy mba ahafahanay manapa-kevitra na ho hanina avy hatrany ilay tranainy na mbola ho hafanaina,
Andininy 3: Mba asio marika ny ranom-boankazo arianareo miaraka @ tavoahangy mpisy azy na mbola azo sotroina na tsia,
Andininy 4: Raha misy poizina arianareo dia fonosy tsara dia ataovy fato-maty mba tonga dia ho takatray hoe maty izay mihinana azy
Andininy 5: Raha hena manta satria mety efa misy fahasimbana ohatra no arianareo dia mba avy hatrany dia teteho fa indraindray tsy manana antsy izay mahazo azy,
Andininy 6: Miangavy raha mba azonareo atao, aza mandrora anaty fako mbola azo hanina (azonareo ny antony)
Andininy 7: Aza ampiarahana amin'ny fakon-tsakafo ny vakin-tavoahangy na vera na lovia,
Andininy 8: Aza andrasana ho simba be ny sakafo efa tsy tianareo intsony vao ariana fa misy mantsy aminay tsy afaka mampangotraka azy intsony fa tonga dia mandrapaka,
Andininy 9: Noho ny fisian'ireo tsy mahatanty sakafo misy tsirony samihafa mifangaro dia mba atokantokany izay tsy tokony hikambana,
Andininy 10: Miantoka ny fiveloman'ny fianakaviana marobe eto Madagasikara ny ambin-tsakafo arianareo ka maneho fisaorana anareo @ fanajana ireo fangatahana voalaza eo ambony.
Mangataka @ fitondrana izahay mba hanao famonoana alika indray fa mihamaro koa ry zareo ka henjana ny fifandrombahana @ ireo masiaka.
Hantenaina fa hihatra avy hatrany ity filazana ity raha mba misy miraharaha ihany
© Nanou Fiankinana R - 7 mey tamin'ny 7h45mn hariva
Fanitsian-dresaka : Ravalomanana sa ny Mpizaika
Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 11:10
Mankaleo be lay familian-dresakareo mpanao gazety sasany sy mpanao politika :
- Ravalomanana tenany, notohanan'i Ratsiraka, no nangataka fanafoanana lay décret residence fixe, fa tsy resolution Fampihavanam-pirenena
- Azon'ny Filoham-pirenena nolavina iny na hoe "andraso kely"
Raha foana lay décret, tsy nisy mihitsy fangatahana na filazana fa foana ny didim-pitsarana efa nivoaka momba azy.
Dia misy Sahy miteny izao hoe "nodiovin'ny mpizaika teny Ivato Ravalomanana"
"Ravalomanana no tena mivoaka mpandresy fa nanadiovana azy no nanaovana an'iny"
Ravalomanana tenany nangataka fanokafana ny TIKO (na inona na inona zavatra nataon'i Ravalomanana tsy tiako dia za koa mba maniry ny hisokafan'ny Tiko ka hanara-dalàna toy ny rehetra fa tsy gros requin),
Izy tompony nilaza ampahibemaso fa vonona handoa ny hetra sns zay tokony aloany fa mba jerena zay hanamorana izany nohon'ny fahavoazana sy ahafahany mi-demarrer!
Kanefa dia misy Sahy miteny fa "Zay olona 2000 teny Ivato no hanafoana ny hetra sns tokony aloan'ny TIKO ka hisokatra mora foana"
TSY MAHAY MISITRAKA FAHALALAHANA!!
Tsy nahita mihitsy aho teny mpanao gazety ka hoe mba ni s'introduire tany anaty commission tany nijery ary nitantara ny fizotrany sy ny adihevitra nifanaovana.
© Alisoa Rasoanaivo tao amin'ny Facebook -
Lahatsoratra nanjavona? resaka fiainam-pirenena
Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:49
Miarahaba antsika rehetra indray e!Mba tena tohina sy nalahelo ny fo raha nahare fa hay ve ka nasaina nianto-tena ireo gadra 5 mirahalahy Jean-Marc Koumba sy ireo mpiasan'ny ACM 4 namany rehefa avy novotsorana tamin'ny gadrany tany Diego ka hody any Antsirabe.
Marihina fa misy raim-pianakaviana sahirana tamin'ireo mpiasan'ny ACM ireo satria na dia ny sakafo nohanina tany amponja aza dia nifampitadiavana sy nanahirana isan'andro nandritra izay 55 andro nangejàna azy ireo izay.Tsy mba afaka namangy azy ny fianakaviany noho ny fahasahiranana ary mazava ho azy fa tsy mba nanana mpisolovava ry zareo niaro azy tamin'izao tranga mampalahelo sy tsy rariny nahazo azy izao.
Ankehitriny dia fantatra fa nasaina nianto-tena ry zareo nandeha nody any Antsirabe.Iaraha-mahalala tsara nefa ny elanela-tany misy avy ao Antsiranana sy Antsirabe izay tsy natao ho an'ny rehetra ny fananana vola atao saran-dalana amin'izany.Ny azo ambara dia niaritra sy nisedra ny tsy rariny sy fanaovana tsinontsinona hatramin'ny farany ireto raim-pianakaviana ireto.
Raha ny tokony ho izy sy fanao any @ tany mandroso manaja ny zon'olombelona dia farafaharatsiny mba nanampy na dia kely monja ireo mpiasa sy raim-pianakaviana ireto ny orinasa iasàny (ACM) saingy ity farany koa vao maika nampivandravandra tamin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny fampanjakàna ny tsy rariny ataon'ny fitsaràna izay lasa fitaovana politika eo ampela-tanan'ny fitondràna ankehitriny. Raha ny tokony ho izy dia ny fitsarana no aro sy fiarovana ny madinika saingy indrisy fa ny mifanohitra amin'izany no mitranga ankehitriny.
Ny dahalo mpamono olona sy mpandrava fananan'olona MODY niova fo indray no arovana sy tohanana ara-bola. Eto ny tenako dia mirary soa sy mankahery manokana ireo rehetra izay iharan'ny tsindrihazolena sy miaina ny tsy rariny rehetra eto amin'ity Firenentsika ity ary singaniko manokana amin'izany ireo raim-pianakaviany dimy mirahalahy nigadra tany Antsiranana sy ireo gadra politika mbola miforitra any amponja any ankehitriny.
Etsy andanin'izay raha ny vaovao heno dia handeha hikopak'elatra hiverina any France (Doubai???) indray Atoa Andry Rajoelina rehefa avy nandalo fotoana vitsy teto an-tanindrazana. Toy ny efa mahazatra an'ity sefon'ny tetezamita teo aloha ity moa dia any amin'ny firenena ivelany hatrany izy sy ny fianakaviany no miatrika ny fetin'ny noely sy faran'ny taona hatramin'izay. Tsy misy maharatsy izany satria izay no safidiny; ny ho enti-manana rahateo misy dia misy saingy ny mba tiana hisintomana ny saintsika namana eto dia ny fisian'ny mizàna tsindrian'ila sy fanaovana zanak'Ikalahafa ny Filoha Marc Ravalomanana.
Ny Filoha Marc Ravalomanana izay filoham-pirenena voafidim-bahoaka in-2 nisesy teto @ Firenena dia mbola tsy mahazo fahafahana hatramin'izao na dia teo aza ilay saritsarina "réconciliation nationale" teny Ivato. Amin'ny fomba ahoana tokoa moa no hahafahan'ny olona 2 na 5 miady hevitra sy mandinika ny ho avin'ny Firenena raha ny sasany manana fahafahana mivezivezy sy malalaka amin'izay rehetra tiany atao, ny iray kosa giazana sy gadraina ary tapenam-bava mba tsy hilazàna hoe atao "otage politique"?
Ialako tsiny amintsika namana rehetra eto fa amiko manokana dia tsy rariny ary fihatsarambelatsihy tanteraka no manjaka eto amin'ny firenena ankehitriny. Amiko mantsy, ary inoako fa maro ny namako no mitovy hevitra amiko, dia i Andry Rajoelina no fototry ny olana sy tokony iharan'ny sazy henjana eto taorian'ny fanonganam-panjakàna feno habibiana nataony teto amin'ny firenentsika. Fanonganam-panjakana izay mbola mampitondra takaitra ny Firenena sy ny fiainan'ny vahoaka Malagasy an-tapitrisa hatramin'izao.Tsy mbola nahantra sy fadiranovana toy izao ity Madagasikara ity fa aleo hazava tsara ny resaka.
Amin'ny fo tsy miangatra: Rariny ve? Ara-dalàna ve ny fahasamihafàna misy eo amin'ny raharaha Rajoelina sy Ravalomanana ankehitriny?
Na izany na tsy izany dia mankahery sy manohana hatrany ny FFKM manoloana izao adidy mankadiry iantsorohan'izy ireo izao. Andriamanitra tokoa anie hanolo-tsaina sy hanome hery azy ireo.